PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: ??? ... ဗမာအစိုးရ လိုင်ဇာဒေသကို ဘာ့ကြောင့် အပြင်းအထန် စစ်ဆင်နေ ရသလဲ ... ???
??? ... ဗမာအစိုးရ လိုင်ဇာဒေသကို ဘာ့ကြောင့် အပြင်းအထန် စစ်ဆင်နေ ရသလဲ ... ???
လိုင်ဇာကို သိမ်းပိုက်ရရှိရန် ဗမာ တပ်မတော်သည် ဗမာပြည် ပြည်တွင်းစစ် သမိုင်းတွင် ရက်အတိုအတွင်း အရက်စက်ဆုံး ငွေကြေး အကုန်အကျ အများဆုံးနဲ့အပြင်းထန်ဆုံး တိုက်ပွဲကို ဆင်နွဲနေကြောင်း တရုတ် - မြန်မာနယ်စပ် စစ်ရေး လေ့လာသူ ဦးအောင်ကျော်ဇော်က ပြောကြားသည်၊ ဗမာ စစ်တပ်သည် ဒီဇင်ဘာ ၂၄ မှ ဇန်နဝါရီ (၇) ရက်ထိ လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှု ၁၁၉ ကြိမ်ရှိခဲ့ပီး ထောင်ပေါင်း များစွာသော ၁၀၅ မမ၊ ၁၂၀ မမ အမြောက်များနှင့် ပစ်ခတ် တုိုက်ခိုက်ခဲ့သည်၊ ဗကပ နှင့် တုိုက်ခဲ့တဲ့ စီစီဝမ်–တာပန် တိုက်ပွဲ (1986) တွေ မှာတောင် ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ လက်နက်ကြီး နှင့် ဝေဟင် ပစ်ကူမှု မယူခဲ့ဘူးဟု ဦးအောင်ကျော်ဇောက ဆက်ပြောပါသည်။ (ဗကပ မပြိုကွဲခင် ကာလထိ ဗကပသည် ဗမာပြည်တွင် အင်အား အတောင့်တင်းဆုံးနှင့် နိင်ငံရေး သြဇာအကြီးမှားဆုံး တော်လှန်ရေး အင်အားစုဖြစ်သည်။ ယနေ့ UWSA "ဝ" တပ်မတော်သည် ဗကပ ခွဲထွက်အဖွဲ့ တဖွဲ့ ဖြစ်သည်။)
ဗမာ စစ်တပ်နှင့် နီးစပ်သည့် သိတင်းရပ်ကွက်များအရ ယခု ထိုးစစ်အတွင်း ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့ မှ ယခုလ ၆ ရက်နေ့အထိ ဗမာ တပ်မတော်ဘက်မှ အရာရှိနှင့် အခြားအဆင့် ကျဆုံးသူ စုစုပေါင်း ၂၀၀ ကျော်နှင့် ဒဏ်ရာ ရသူ ၃၀၀ ကျော်ခန့် ရှိကြောင်း သိရသည်။
မြစ်ကြီနား - ဗန်မော် ကားလမ်းအား ထိန်းချုပ်ထားသော တောင်ကုန်များပေါ်မှ ကေအိုင်အေက ဗမာတပ် ရိက္ခာပို့ စစ်ကြောင်းများကို ချုံခို တိုက်ခိုက်ခြင်ကြောင့် ယခုလို ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဗမာအစိုးရက ပြောသော်လည်း ကေအိုင်အေကို ပြစ်ဒဏ်ပေးရေးနှင့် လိုက်ဇာဒေသကို ထိန်းချူပ် ထားလိုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ဦးအောင်ကျော်ဇော်က ဆက်ပြောပါသည်။
" ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ လိုင်ဇာ ထိန်းချူပ်ရေးပဲ တစ်ကတော့ ကေအိုင်အေကို အပစ်အခတ်ရပ်ရေး ဖိအားပေးဖုို့ နောက်တစ်ခုက စီးပွားရေးမြို့ဖြစ်တဲ့ လိုင်ဇာကိုမြို့ ပျက်ကြီး ဖြစ်သွားအောင် ကြိုးစားတာ ဖြစ်တယ်၊ တစ်ခုလုံးကို ကြည့်မယ် ဆိုရင် ဗမာ စစ်တပ်က ကေအိုင်အေကို ဒဏ်ပေးနေတာ ပညာပေးနေတာ သိပ်ရှင်းတယ်၊ စစ်တပ်နဲ့ အစိုးရ မကွဲပါဘူး အတူတူပါဘဲ" ဟုဆိုသည်။
ယနေ့ အချိန်ထိ လေကြောင်းနှင့် အမြောက်ကြီးများ ပစ်ကူပြီး တိုက်ခုိုက် သော်လည်း ပွိစ့် ၇၇၁ (Bum Re Bum) နှင့် အခြား ပစ်ကုန်း အနည်းငယ်သာ ဗမာတပ်က သိမ်းပိုက် ရရှိသည်။ ဖွန်းပျန်ဘွမ်ကို သိမ်းပိုက်ရန် ထိုးစစ်မှာ ယနေ့အထိ အောင်မြင်မှု မရသေးဘဲ အကျအရှံးများစွာနှင့် တပ်ဆုတ်သွားရသည်။
၁၇ နှစ်ကြာ အပစ်ရပ်ထားသည့် ကေအိုင်အေနှင့် ဗမာတပ်တို့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ မှစ၍ စတင်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ စစ်ပွဲကြောင့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်း ဦးရေ ၁ သိန်းကျော်ခန့် ရှိနေပြီး ဗမာစစ်တပ်ဘက်မှ ကချင်ကျေးရွာများအား စနစ်တကျ မီးရှို့ ဖျက်ဆီးမှုများ ပြုလုပ်ခဲသည့် ဓာတ်ပုံ ဗွီဒီယိုဖိုင် များလည်း အင်တာနက်ပေါ်တွင် ပျံ့ နှံ့ နေသည်။
(သျှမ်းသံတော်ဆင့် သိတင်းကို ကောက်နုတ်တင်ပြသည်။)